Nitarika herisetra ny tsahon’ny fanaovana “sorona olombelona” ho an’ny tetezana Padma tany Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Heloka bevava any Bangladesh ny fanelezana tsaho toy izany.
Voadika ny 12 Aogositra 2019 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, македонски, Ελληνικά, Français, Italiano, বাংলা
Tetezan-dalamby miampita ny renirano maherin'i Padma izay mbola eo andalam-panamboarana ao Bangladesh. Sary avy amin'i Afzal Hossain tamin'ny alalàn'ny Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0
Kasaina ho vita amin'ny volana Desambra 2020 ny famitana ny tetezana lava mirefy 6,1km manavatsava ny renirano Padma, izay mampifandray ny faritra atsimo-andrefan'i Bangladesh amin'ny avaratra sy ny faritra atsinanana. Maro no manantena fa hanova ny tontolo ara-toekarena any amin'ny faritra atsimo-andrefan'i Bangladesh ny Tetezana Padma vaovao.
Na izany aza, ao ambadik'izany fampanantenana ara-toekarena rehetra izany ny tantaran'ny vaovao tsy marina momba ny tetezana Padma izay efa nitarika fisamborana olona miisa valo sy maty roa.
Niteraka resabe ny vaovao tsy marina momba ny fanaovana sorona olombelona
Vetivety dia niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy ny tsaho izay nilaza fa mila “lohan'olona” ny tetezana Padma mba hamitana azy haingana :
— ❣ Mr. MD-S A I F..???⚽ (@S_Alam1999) July 9, 2019
Misy tsaho vaovao mivoaka eto an-tanàna. Manaparitaka lainga ny olona mamon-drongony fa mila lohan'olombelona miisa 100.000 ny famitana ny tetezana Padma. Lainga izany ary tena tsy mitombina . Aza mihaino ireo tsaho ireo.
Efa nivadika ho famonoan'olona ny honohono. Nisy ny tatitra fahafatesan'olona roa tany amin'ny faritr'i Mohammadpur ao Dhaka sy any Ashuganj ao Bramhonbaria taorian'ny niahiahin'ireo andian'olona azy ireo ho naka an-keriny ankizy ho atao sorona ho fananganana ilay tetezana. Tamin'ny tranga vitsivitsy hafa, nisy olona voalaza ho naka an-keriny nodarohana tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny firenena. Nanambara nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny lehiben'ny polisy ao amin'ny distrikan'i Laxmipur hoe:
Na olona marary saina na olona tsy manan-kialofana ireo izay nodarohana sy notanana noho ny fiampangana azy ireo ho mpangalatra ankizy. Tsaho fotsiny ny filazana ho “fakana an-keriny ankizy” .
Araka ny voalazan'ny andininy faha-25 amin'ny Lalànan'ny Fiarovana Nomerika 2018, mety hiatrika telo taona an-tranomaizina na handoa lamandy mitentina BDT 300.000 ( 3.550 USD) na izy roa mitambatra ny olona iray mampiely tsaho amin'ny endrika elektronika. Hatreto, olona miisa valo no efa voatazona manerana an'i Bangladesh noho ny fanaparitahana izany tsaho izany tao amin'ny Facebook.
Tsaho taloha niverina indray
Na dia voalaza aza fa nampifandray ireo tsaho ireo tamin'ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny taona 2015 ny olona sasany izay nilaza fa nanao fifanarahana tamin'ny fanaovana sorona biby (osy sy omby) ireo mpiasa avy amin'ny orinasam-pananganana Shinoa nandritra ny dingana fanatanterahana voalohany ny tetikasa tamin'ny fananganana ny tetezana. Mampifaly an'Andriamanitra ny fanaovana sorona biby araka ny finoan'ny mpiasa Shinoa ary azo fantarina mialoha raha misy ny loza lehibe hitranga. Nizara ny sarin'izany biby izany izay natao sorona ny olona sasany mba hanehoana ny ran'ny olona latsaka sy ny tantaran'ny ankizy notapahan-doha ho an'ny tetezana.
Tsy zava-baovao ao Bangladesh ny karazana tantara tahaka izany. Nisy angano fahiny izay milaza fa ilaina atao sorona ny lohan'olombelona rehefa misy ny fanamboarana lehibe. Nahatsiaro ilay tsaho nitovy tamin'izany tamin'ny fahazazany ny mpisera Facebook HR Sanvi Ahmed nandritra ny fananganana ny tetezana Kanchpur tany amin'ny faramparan'ny taompolo 1970:
Mbola mpianatra aho tamin'izany. Niresaka matetika momba ny fanamboarana ny ambanin'ny tetezana Kanchpur ireo namako. Voalaza tamin'izany fa notakiana ny taolan'olombelona mba hanamafisana ny tongotry (fototra) ny tetezana. Farafahakeliny taolan'olombelona miisa 500 no takiana ho amin'ilay tetezana lehibe. Lasibatra ny ankizy ary nalefa tany amin'ireo sekoly ireo fitakiana. Nahazo taratasy toy izany ihany koa ny sekolinay. Nandefa ankizy 1 na 2 nankany amin'ny mpiasan'ny fananganana tetezana ireo mpampianatra. Somary nanahy sy natahotra izahay. Raha toa ka ho alefa any ihany koa izahay . Tsy nahita tory izahay nandritra ny alina. Betsaka ny ahiahy tao an-doha kelinay!
Nipoitra indray ny tsaho nitovy tamin'izany nandritra ny fananganana ny tetezana Shah Amanat teo ambonin'ny renirano Karnaphuli any Chittagong tamin'ny taona 2010.
Tamin'ny angano Haindò taloha no nahenoana voalohany ny fanaovana sorona olombelona. Voalaza tany anaty lahatsoratra maro be taloha fa notapahana ny lohan'olombelona mba hanomezam-boninahitra ireo demonia alohan'ny hananganana tetezana miampita ny renirano mikoriana. Fomba fanao teo amin'ny sivilizasiona Pundra tany amin'ny dimy arivo taona lasa ny Narboli (sorona olombelona) mba hampifaliana ny andriamanibavin'ny fambolena.
Vita tamin'ny taona 1750 ny farihy Ramsagor ao amin'ny Distrikan'i Dinazpur any Bangladesh. Araka ny angano, tsy nisy rano teto tany amboalohany fa rehefa nanao sorona ny ainy tao amin'ity farihy ity ny Printsy Ramnath dia feno rano izany. Sary avy amin'i Selim Khondokar. CC BY- 4.0
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny BBC, nanamafy ny maha-zava-dehibe ny angano i Susmita Chakrabarti, mpampianatra ao amin'ny Departemantan'ny Fomba Amam-panao ao amin'ny Oniversiten'i Rajshahi.
Efa zatra ireo angano ireo ny taranaka nifandimby. Noho izany, mora mino ny tsaho toy izany izy ireo kanefa tsy manamarina, na dia amin'izao vanim-potoanan'ny teknolojia izao aza.
Raha niezaka namehy ny fiparitahan'ity tantara ity ny governemanta Bangladeshi dia nilaza izy ireo fa handray fepetra hentitra amin'ireo izay manely tsaho:
Mitandrema amin'ireo olona izay manely tsaho fa mila lohan'olombelona ny tetezana Padma. Efa nosamborin'ny polisy izy ireo.
Namoaka fanambarana tamin'ny 9 Jolay 2019 ny tompon'andraikitra mpanangana ny tetezana izay nandà ny tsaho momba ny sorona ary nilaza izy ireo fa ny faritra “mitady tombontsoa manokana” no nanaparitaka izany, ary nangataka ny vahoaka mba tsy hiraharaha ny tantara tsy misy fototra toy izany.